तिहार Archives - Lokpati.com
Tag - तिहार
भाेलि भाइटीकाः शुभसाइत कति बजे ?
काठमाडौं। प्रत्येक वर्ष कात्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन भोलि भाइटीका हाे। भाेलिकाे दिन दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दैछन् ।
यमपञ्चकसमेत भनिने तिहारको पाँचौं दिन...
यमपञ्चकको चौथो दिन आज : गाई, गोरुकाे पूजा गरिँदै
काठमाडौं, ११ कात्तिक। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु र कृषकको पूजाआजा गरी मीठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ ।
गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो । गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै...
देउसीमा भनिने बलि राजा को थिए ?
तिहार हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको दोस्रो ठूलो पर्व हो। यसको अर्को रमाइलो पक्ष देउसी भैलोको नाचगान पनि हो। देउसी भैलो खेल्न युवन र केटाकेटी मात्र होइन, बूढै उमेरका मान्छे पनि रौसिन्छन्। टोली नाइकेले लयखार ढड्ढमा नाटकीय शैलीले...
आज तिहारकाे तेस्राे दिन, यसरी गर्नुहाेस् लक्ष्मी पूजा
काठमाडौं, १० कात्तिक। तिहारको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ । धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्नाले घरमा लक्ष्मीको बास हुने तथा सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ ।
बत्ती नबालेको घरमा लक्ष्मीले बास...
आज कुकुर तिहारः कुकुर पूज्नुकाे यस्ताे छ धार्मिक विश्वास
काठमाडौं, १० कात्तिक। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको तेस्रो दिन आज घर घरमा मीठामीठा खानेकुरा खान दिएर कुकुरको पूजा गरी कुकुर तिहार मनाइँदैछ । कुकुर तिहार यमपञ्चक अर्थात् दीपावली पर्वको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको...
संघारमा तिहारः आहा ! सयपत्री फूल…
प्रेम पौडेल उज्जवल/चितवन। नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड शुभ दिपावली नजिकिँदै गर्दा यतिबेला चितवनको माडीमा ‘सयपत्री’ ढकमक्क फूलेका छन् ।
माडी नगरपालिकास्थित कल्याणपुर, ढिकुरबारी लगायतका विभिन्न ठाउँहरुमा यतिबेला ‘सयपत्री’...
मार्केट/कर्पाेरेट • समाचार
निगमको थानकोटस्थित डिपोबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत आसपासका विभिन्न पम्पलाई आज...
भारतीय फूलका कारण नेपाली मालाले मूल्य पाएन
काठमाडौं, २१ कात्तिक । नेपालमा उत्पादन भएका फूलको उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरु चिन्तित भएका छन् ।
भारतबाट आयातित फूलका कारण यहाँ उत्पादन हुने फूलले उचित मूल्य नपाएको गुनासो फूल उत्पादक किसानको छ ।
आफूले उत्पादन गरेको फूल...
काठमाडौं, १९ कात्तिक । तिहारका बेला काठमाडौंमा राति देउसीभैलो खेल्न नपाइने भएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलय राति १० बजेसम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न दिने निर्णय गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी...